January 04, 2017 – Waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa qaban qaabada doorashada Gudoonka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxaana hada heer gabo gabo ah maraya Diiwaangalinta Musharaxiinta u taagan Xilka Gudoomiyaha iyo kuxigeenadiisa.
Qaar kamid ah Musharaxiinta u taagan xilka Gudoomiyaha Baralamaanka Federaalka Soomaaliya iyo kuxigeenadiisa ayaa maanta si rasmi ah isku diiwaan galiyay, waxaana wali la filayaa in Musharaxiin kale oo xilalkaasi damac ugu jiro inay isi soo diiwaan galiyaan.
Xubnaha Musharaxiinta ee manta isdiiwana galiyay ayaa waxaa kamid aha Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka federaalka Soomaalia mudane, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Gudoomiye kuxigenkii koowaad ee Baarlamaanka Jeylaani Nuur Iikaar iyo musharaxiin kale.
Musharaxiintan maanta is diiwaangaliyay ayaana u tartamaya Xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo kuxigenadiisa, waxaana wali adag in la saadaaliyo cida ku guuleesan doonta xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo labadiisa kuxigeen.
Hadaba Xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa waxaa isku soo sharaxay isna Diiwaan galiyay mudanayaasha kala ah:
1-Maxamed Cusmaan Jawaari
2-Cabdirashiid Maxamed Xidig
Xilka Gudoomiye kuxigeenka Koowaad waxa isku sharaxay
1-Jeylaani Nuur Iikaar
4-Khaalid Macow C/qaadir.
January 4, 2017 tuugahaladilo2015
Ra’iisal Wasaare Khayre oo Kulan la Qaatay Guddiga Difaaca & Amniga ee Baarlamaanka Federaalka (SAWIRRO) April 26, 2017